ကမ္ဘာကြီး၏ အပြင်ဘက် အာကာသတွင် လက်နက်များ ချမထားရေး ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ကို ပါကစ္စတန်နှင့် ရုရ? - Yangon Media Group
ပါကစ္စတန်နှင့် ရုရှားတို့သည် အာကာသ၌လက်နက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကို တားမြစ်ရန်တူညီသော ရပ်တည်ချက်ရှိနေကြကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သွားကာ ဤရည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက် ကဖော်ပြခဲ့သည်။
ဤပြင်ပကမ္ဘာ၌ ပထမဆုံး လက်နက်မတပ်ဆင်ရဆိုသည့် အဆိုကို နှစ်နိုင်ငံအကြားတူညီသော အမြင်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက် သည်။ ရုရှားနှင့်ပါကစ္စတန်တို့က လဟာပြင်၌ လက်နက်မတပ်ဆင်ရ ဟူသည့်သဘောထားကို အာကာသကိုအသုံးပြုနေကြသည့် အခြားနိုင်ငံတွေကလည်း လိုက်ပါလုပ် ဆောင်စေလေိုကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။ ရေရှည်တွင် ငြိမ်းချမ်းသော အာကာသတွင် လက်နက်တပ်ဆင်လာပါက ကမ္ဘာကြီးကို ခြိမ်းခြောက်လာလိမ့်မည်ဟု ပါကစ္စတန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေသတွင်း လူငယ်များ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန?
မျိုးသန့် မျိုးစေ့များ အခမဲ့ပေး မြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးရုံးသို့ တောင်သူများ ဆက်သွယ်နိုင် ဟ